कोहलीले तोड्न सक्लान् तेन्दुलकरको १०० शतकको रेकर्ड ? पिटरसनको यस्तो छ आंकलन – WicketNepal
कोहलीले तोड्न सक्लान् तेन्दुलकरको १०० शतकको रेकर्ड ? पिटरसनको यस्तो छ आंकलन
Birat Jung Rayamajhi, २०७७ जेष्ठ २, शुक्रबार १९:५१
भारतीय कप्तान बिराट कोहली अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो रेकर्डको लागि सधै चर्चामा रहने गर्छन। ३२ वर्षीय कोहलीले हालसम्म ४३ वानडे तथा २७ टेस्ट शतक आफ्नो नाम गरिसकेका छन्। तर कोहली अझै सचिन तेन्दुलकरको ऐतिहासिक १०० शतकको रेकर्डबाट ३० शतक टाढा रहेका छन्।
कोहलीले १०० शतक पार गर्न सक्लान् या नसक्लान् भन्नेमा क्रिकेट पण्डित र प्रेमीहरु बीच बहस हुने गरेको छ। एउटा ताजा अन्तर्वार्तामा लेजेण्ड इंग्ल्याण्ड क्रिकेटर केभिन पिटरसनले यसै विषयमा आफ्नो धरान प्रस्तुत गरेका हुन्।
टाइम्सन्युजसंगको अन्तर्वार्ताको क्रममा पिटरसनले कोहलीले उक्त ऐतिहासिक रेकर्ड तोड्न मुस्किल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो सफलता हात पार्न कोहलीलाई फिटनेसले साथ दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।
“कोहलीलाई मुस्किल हुनेछ किनकि इन्जुरीले गर्दा करियर लामो तन्किन मुस्किल हुनसक्छ”
पिटरसनले कोहली भन्दा सचिन मैदानमा निकै शान्त रहेको र टि-२० क्रिकेट उनको करियरको महत्वपूर्ण हिस्सा नरहेको पनि थपे।
“तेन्दुलकर मैदानमा कोहली जस्तो आक्रामक थिएनन् र उनि निकै शान्त देखिन्थे। कोहलीको सफलता उनको करीयर कति लामो रहनेछमा निर्भर रहनेछ”
“याद गर्नुस, कोहली सबै तिन फर्म्याटको खेल खेल्ने गर्छन्, अझ आईपीएल पनि खेल्ने गर्छन्। सचिनको करियरको धेरै जसो हिस्सामा टि-२० क्रिकेट थिएन भने आईपीएल पनि थिएन। त्यसैले कोहलीको सफलता उनले थप कति क्रिकेट खेल्छनले गर्नेछ। ”
सन् २००८ मा भारतको लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यु गरेका कोहलीले हालसम्म २ सय ४८ खेलमा ११,८६७ रन बनाएका छन् जुन क्रममा ४३ शतक र ५८ अर्धशतक प्रहार गरिसकेका छन्। यस्तै टेस्टमा ८६ खेल खेल्दै २७ शतक र २२ अर्धशतक मदतले ७२४० रन बनाएका छन्। टि-२० अन्तर्राष्ट्रियमा शतक प्रहार गर्न नसकेका कोहलीले ८२ खेलमा २,७९४ रन बनाएका छन् जुन क्रममा २४ अर्धशतक प्रहार गरेका छन्।
सन् २०१३ मा अन्तिम पटक भारतको लागि खेलेका मास्टर ब्लास्टर सचिन तेन्दुलकरले टेस्टमा ५१ शतक र ६८ अर्धशतक मदतले १५,९२१ रन, एकदिवसीयमा ४९ शतक र ९६ अर्धशतक मदतले १८,४२६ रन बनाएका थिए। करियरमा एउटा मात्र टि-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका सचिनले १० रन बनाएका थिए।